.မိဘတွေကို ဒီဘဝမှာသာမက သံသရာမှာပါပြည့်စုံစေချင်လို့ သူတို့လက်နဲ့ကိုယ်တိုင်လှူလို့ရအောင် လတိုင်းငွေအပုံလိုက်နဲ့ကန်တော့တဲ့ပိုင်တံခွန်. – Askstyle
.မိဘတွေကို ဒီဘဝမှာသာမက သံသရာမှာပါပြည့်စုံစေချင်လို့ သူတို့လက်နဲ့ကိုယ်တိုင်လှူလို့ရအောင် လတိုင်းငွေအပုံလိုက်နဲ့ကန်တော့တဲ့ပိုင်တံခွန်.
Model ၊ သရုပ်ဆောင် မင်းသားချောလေး ပိုင်တံခွန်ကတော့ အရပ်ရှည်ပြီး ရုပ်ရည်ချောမောခန့်ညားတာကြောင့် မိန်းကလေးပရိသတ်တွေက ဝိုင်းဝိုင်းလည်အောင် အားပေးနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ပိုင်တံခွန်က ယောက်ျားပီသတဲ့ အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ လူချစ်လူခင်ပေါများတဲ့ ပိုင်တံခွန်က မြန်မာနိုင်ငံမှာသာမက ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာပါ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လူသိများအောင်မြင်နေပြီလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။
ပိုင်တံခွန်က မာန်မာနကင်းသလို အေးအေးဆေးဆေးနေတတ်ပြီး လူကြီးသူမတွေအပေါ်မှာလည်း တကယ့်ကိုသိတတ်ရိုသေသူလေး ဖြစ်ပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် မိဘနှစ်ပါးကို အရမ်းတန်ဖိုးထားတဲ့ ပိုင်တံခွန်က သူကိုယ်တိုင်ရှာဖွေထားတဲ့ အနုပညာကြေးတွေနဲ့ လုပ်ကျွေးပြုစုနေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုလည်း သားလိမ္မာလေး ပိုင်တံခွန်က လစဥ်လတိုင်း ဖေဖေနဲ့မေမေကို ငွေအပုံလိုက်နဲ့ကန်တော့ရတဲ့ သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးကို ထုတ်ပြောပြလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ပိုင်တံခွန်က “ကျွန်တော်ကတော့ လောဘကြီးတယ် မိဘတွေကို ဒီဘဝမှာလည်း ပြည့်စုံစေချင်တယ် သံသရာမှာလည်း ပြည့်စုံစေချင်တယ် ဒါက အဖေနဲ့အမေရဲ့ သံသရာမှာပါမယ့် ကုသိုလ်ရေးတွေလုပ်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်ရဲ့လစဉ်ထောက်ပံ့ကြေးငွေပါ မိဘတွေ သက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့ချိန်မှာ သူတို့လက်နဲ့ သူတို့ကိုယ်တိုင်လှူဒါန်းလို့ရအောင်ပါ” ဆိုပြီး ရေးသားပြောပြထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပိုင်တံခွန်ကတော့ မကြာခင်ကလည်း မိဘနှစ်ပါးအတွက် ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ အိမ်တစ်လုံးဆောက်လုပ်ပြီး Surprise လုပ်ခဲ့သေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကဲ မိဘတွေအပေါ်မှာ ကျေးဇူးသိတတ်လွန်းတဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့ပုံရိပ်တွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။
Model ၊ သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းသားေခ်ာေလး ပိုင္တံခြန္ကေတာ့ အရပ္ရွည္ၿပီး ႐ုပ္ရည္ေခ်ာေမာခန႔္ညားတာေၾကာင့္ မိန္းကေလးပရိသတ္ေတြက ဝိုင္းဝိုင္းလည္ေအာင္ အားေပးေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါ့အျပင္ ပိုင္တံခြန္က ေယာက္်ားပီသတဲ့ အမိုက္စားခႏၶာကိုယ္အခ်ိဳးအစားကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ လူခ်စ္လူခင္ေပါမ်ားတဲ့ ပိုင္တံခြန္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာသာမက ျပည္ပႏိုင္ငံေတြမွာပါ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ လူသိမ်ားေအာင္ျမင္ေနၿပီလည္း ျဖစ္ပါတယ္ ။
ပိုင္တံခြန္က မာန္မာနကင္းသလို ေအးေအးေဆးေဆးေနတတ္ၿပီး လူႀကီးသူမေတြအေပၚမွာလည္း တကယ့္ကိုသိတတ္႐ိုေသသူေလး ျဖစ္ပါတယ္ ။ အထူးသျဖင့္ မိဘႏွစ္ပါးကို အရမ္းတန္ဖိုးထားတဲ့ ပိုင္တံခြန္က သူကိုယ္တိုင္ရွာေဖြထားတဲ့ အႏုပညာေၾကးေတြနဲ႔ လုပ္ေကြၽးျပဳစုေနတာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ အခုလည္း သားလိမၼာေလး ပိုင္တံခြန္က လစဥ္လတိုင္း ေဖေဖနဲ႔ေမေမကို ေငြအပုံလိုက္နဲ႔ကန္ေတာ့ရတဲ့ သူ႔ရဲ႕ရည္႐ြယ္ခ်က္ေလးကို ထုတ္ေျပာျပလာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္ ။
ပိုင္တံခြန္က “ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ေလာဘႀကီးတယ္ မိဘေတြကို ဒီဘဝမွာလည္း ျပည့္စုံေစခ်င္တယ္ သံသရာမွာလည္း ျပည့္စုံေစခ်င္တယ္ ဒါက အေဖနဲ႔အေမရဲ႕ သံသရာမွာပါမယ့္ ကုသိုလ္ေရးေတြလုပ္ဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕လစဥ္ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြပါ မိဘေတြ သက္ရွိထင္ရွားရွိေနတဲ့ခ်ိန္မွာ သူတို႔လက္နဲ႔ သူတို႔ကိုယ္တိုင္လႉဒါန္းလို႔ရေအာင္ပါ” ဆိုၿပီး ေရးသားေျပာျပထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ပိုင္တံခြန္ကေတာ့ မၾကာခင္ကလည္း မိဘႏွစ္ပါးအတြက္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့ အိမ္တစ္လုံးေဆာက္လုပ္ၿပီး Surprise လုပ္ခဲ့ေသးတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ကဲ မိဘေတြအေပၚမွာ ေက်းဇူးသိတတ္လြန္းတဲ့ ပိုင္တံခြန္ရဲ႕ပုံရိပ္ေတြကို ျပန္လည္မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္ ။